Ma doonaysaa barnaamij caawin doona in aad ku biiri gaaban video clips 3GP diiwaan by camera telefoonka aad? Tani waa mid caadi ah tan iyo dad badan oo naga mid ah ku qaadan doonto faa'iido ah ee telefoonada smart in videos shot ku haboon. Si aad isu geeyo, kuwaas oo yar 3GP video clips, waxaan jeclaan lahaa inaan soo bandhigo joiner sahlan in la isticmaalo 3GP in Galiyo 3GP videos leh tayo sare leh.
Taasi Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) (Windows 8 taageeray). Waxaa hayaa tayada asalka iyagoo goob-beegyada uu customizable iyo sare. Ka sokow ku biiro 3GP videos, waxaa kaloo ka caawisaa kartaa inaad ku biirto video files dhammaan qaabab loo jecel yahay, sida MP4, AVI, MOV. MPEG, wmv, MKV, VOB, mod, TOD, iwm maxay ka badan, iyada oo saamaynta free KMG ah ama Intro / credits bixiyo, waxaad samayn kartaa waa mid macna iyo iminka.
Hadda free download verison tijaabo ah Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) oo ay raacaan hoos ku hagitaan talaabo-to-tallaabo. Haddii aad socda Mac ah, fadlan la qaato Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac)) si ay ugu biiraan 3GP videos ee Mac. Tallaabooyinka ku dhowaad isku mid yihiin.
Qayb First, sida loogu biiro 3gp videos la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Qaybta labaad, halkan waa ka sii sareysa toban joiners 3GP free ugu wanaagsan ee dadka isticmaala Windows
Qayb First, sida loogu biiro videos 3gp la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
1 files Import 3GP
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo ordaya Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), fadlan guji "Import" xitaa files 3GP on folder faylka, ama uun jiidi oo iyaga iska furmo suuqa hoose. Dhammaan clips 3GP raran ku tusi doonaa sida thumbnails on User bidix ee Album. Waxaad laab laabi karo guji file 3GP kasta oo si ku eegaan on suuqa kala screen midig.
2 Ku biir files 3GP by jiitaa-n-dhibic
Si aad isugu misho badan files 3GP, iyaga dooro by haysta hoos Ctrl ama wareeg oo muhiim ah, oo markaas iyaga Jaximo Timeline video ah. Waxaas oo dhan files 3GP ayaa ku biireen aan joogsiga kasta. Waxaad riix kartaa icon play u leedahay in jeeg. Haddii aad rabto in aad beddesho amarka iyaga u, kaliya jiidi video clip in ay booska aad rabto in aad meel. Fiiro gaar ah: Fadlan ha ku dahaadhaa mid clip gal kale, haddii kale waxaad kala doonaa laba qaybood.
3 Ku biir 3GP videos la kala guurka (optional)
By default, waxaa jiri doona kala guurka ma codsatay in ay soo biiray 3GP videos. Haddii aad rabto in aad ku darto gacanta ku saabsan sida mid video clip kale daba gashaan, waxaad u baahan doontaa in aad ku darto guurka dhexeeya clips. In sidaa la yeelo, guji tab-guurka on toolbar ah, iyo jiidi aad template doonayay in uu booska diirada on waqtiga. Si aad ku dari guurka isla clips oo dhan, waxaad xaq u riixi kartaa kala guurka sida aad doonayso inaad dooratid "waxay khuseeyaan dhammaan" iyo "Random in All" in lagu daro kala guurka ee seconds.
Talooyin: Waxaad kale oo dillaaci kara, isku shaandheyn, dhajisan, jar, ama videos 3GP dalagga la Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor).
4 Isku dar files 3GP mid
Ka dib markii ay ku daray kala guurka aad doonaysey, waxaad riixi kartaa batoonka Play in ay ku eegaan ka 3GP video biireen. Markii wax walba oo ku qancay, guji "Abuur" dhexe ee suuqa kala barnaamijka si loo badbaadiyo faylka 3GP isku dhafan. In uu furmo suuqa wax soo saarka, waxaad dooran kartaa dhammaan qaabab loo jecel yahay, ama filaayo in horena loogu loo maqli on iPod, iPhone, iPad. Sidoo kale, waxaad si toos ah u gali kartaa file 3GP aad abuuray in YouTube ama 3GP gubi in DVD video u arkaysid on TV.
Waxa kale oo aad ka fiirin kartaa hage video ee hoose:
Qaybta labaad, halkan ku badan yihiin hogaanka toban joiners 3GP free ugu wanaagsan ee dadka isticmaala Windows
Waa joiner video cabsi badan ku siinayaa dabacsanaan iyo aad u saamaxaaya in ay xaalkaa aad video. Tani daaqadaha free video utility processing waxaa ay dardargelisay nidaamka si ay u gaaraan hawlgallada toosan degdeg ah oo hufan oo ku saabsan wax kasta oo video. Waxaa ku jira awoodda processing Dufcaddii oo awood u farsameeyo tiro badan oo video files. Waxa kale oo lagu kordhin karaa qaar ka mid saddexaad video xisbiga filtarrada iyo saamaynta wanaagsan video saarka. In kasta oo ay inta badan waxa jira shaci iyo processing video files, waxa ay sidoo kale ka shaqeyn doona nooc ka mid ah images BMP. Kale oo ka soo biiray videos, waxa kale oo aad u isticmaali karto si aad jar oo nadiif ah videos ka hor iyaga dhoofinta in aad disk adag.
2. Qaabka Factory
Factory Qaabka waa video aadka wax ku ool ah iyo Converter audio in sidoo kale taageertaa laga guurayo file iyo qaybsama. Waa MFT Converter warbaahinta xorta ah waa la jaan qaada MP4 / 3GP / Mpg / AVI / wmv / FLV iyo files SW. Waxaa lagu wadaa in ay qabtaan oo dhan laga badalay video ka mid ah video faylasha kor ku xusan, files audio iyo sidoo kale sawirada. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu dhiso file video ah ka hor ama ka dib biirtay biirtay. Waa ay fududahay inaad ku biirto videos la qalab, inaad sameyso oo dhan waa ay doortaan videos ah, hubi fursadaha wax soo saarka iyo aad ku biiri.
3. Pro ​​Saciiro Media
Qof kasta oo raadinaya lagu kalsoonaan karo oo si fudud loo isticmaali video joiner daaqado Waa shardi in la tixgeliyo eegayaan Pro warbaahinta Saciiro. Waa aalad lacag la'aan ah PC in dhibco ah warbaahinta tafatirka dhamaystiran iyo adeegyada u qaadidda. Waxaad si fudud ku biirin karaan AVI, Mpeg, 3gp iyo wmv video qaabab la isticmaalayo qalab this.
EfficientMP4 aad, 3gp, Divx, AVI, XviD, Mpeg, wmv iyo FLV video joiner in uu u shaqeeyo sida la filayaa in markii ugu yaraan ay suurtagal tahay. Waxaad si fudud ku dari kartaa sida badan video files sida aad karto, diyaarin aad video yar gudbiyo hab kasta oo aad rabto in aad ka hor inta iyaga ku biirtay, gubi dhan videos ee file hal, uu leeyahay oo dhan encoders video iyo gartaan qalabka iyo la kaliya qasabno yar, waxaad u baahan doontaa clips oo dhan ku biireen stress free.
Qalabkani waxa uu awood kuu siinayaa in uu ku biiro videos aan dib-u-Deji. Tani daaqadaha joiner 3gp free sidoo kale taageertaa qaabab video kale oo ay ka mid yihiin AVI, MP4, wmv, PSP, iPhone iyo si ka badan. Inkasta oo laga yaabo in ay gaabis ku maarayso videos ah, waxaa soo saarta a video tayo sare leh oo aan marnaba la gooyn doonaa ama lumiso qayb ka mid ah clips aad. Waxaad ku biiri kartaa sida badan videos sida aad rabto hal mar iyo in qaab kasta. Waxaa la doorbidaa ay sahlan in ay isticmaalaan interface sidaas u baahan aqoon farsamo ee beddelaad video oo laga guurayo lahayn.
Tani waa video ku biiro qalab premium in fursado siisaa dadka isticmaala in ay isku biiri waaweyn videos in ay la yimaadaan mid ka mid ah faylka. Barnaamijkan wuxuu taageeraa ugu qaabab video oo aad isku dari kartaa dhowr video files galay mid ka mid file video aan kala joogsi lahayn. Waxay leedahay interface user filaayo in la hubiyo in ay fududaato in la isticmaalo iyo sidoo kale bixisaa feature gaar ah halkaas oo aad si fudud u dalban kartaa kala guurka oo u dhexeeya videos.
7. AHV Video Joiner
Tani waa joiner video multi-ujeeddo in sidoo kale loo isticmaali karaa sida barnaamijka qaybsama tafatirka video firfircoon iyo sidoo kale. Tani dhan-in-mid Windows software siisaa dadka isticmaala ay awood u leeyahay inuu ku biiro videos, iyo sidoo kale iyaga oo la kala xaalkaa inay doonayeen. Waxa ay taageertaa ugu qaabab video ay ka mid yihiin Mpeg, 3GP, wmv, FLV, YouTube, Flash, AVI iyo si ka badan. Hel ugu wanaagsan ee reer aad video files by iyaga sixiddiisa ka hor inta iyaga ku biiraan galay mid ka mid file waaweyn.
Tani waxaa loo arkaa laga guurayo video oo qaybsama qalabka ugu fiican ee Windows. Waxay bixisaa qaababka aan xad lahayn in dadka isticmaala ay ka mid yihiin mid aad u awood badan xawaare 64 waxoogaa la xasiloonida sare, oo ah hab fudud tafatirka, degdeg ah multi-track video haya'ad iyo goobta shaqada la fududeeyey oo ka kooban hal abuur leh oo dhan in interface aad u fududahay in la isticmaalo.
Tani waa video joiner miisaanka yar oo magaabay qaab aan muuqan oo la 3Go, AVI iyo qaabab file Mp4 shaqeyn doonaan. Its ugu dambeeyey version leedahay interface user garaafyada iyo awoodaha Falanqeynta cabsi badan oo kor ay ku oolnimada iyo wax soo saarka. Waxaa si xor ah loo heli karo isticmaalka aan ganacsiga ahayn oo kale oo aan ahayn ku biiro aad videos, waxa ay sidoo kale kaa caawin doona diyaarinta iyo dib-u-Indexing musuqmaasuq aad video files. Runtii waa la yaabka lahaa fududahay in la isticmaalo oo hufan video midoobeen ah.
In kasta oo dib-u-Deji waxaa inta badan loo baahan yahay in qalab, laakiin taasu waxay awood ku biiro aad ku ool ah oo sare video tayo leh. Ku biir badan video clips galay mid ka mid aan kala joogsi lahayn file video in intiisa badan ay taageereen qaabab video. Waa sahlan tahay in lagu daro videos oo iyaga loogu badalo. Waxaad ku dari kartaa videos qaabab video kala duwan iyo u hesho in ay ku milmaan iyaga ku adkaysato lacag la'aan ah iyadoo la isticmaalayo this video Barnaamijka daaqadaha laga cabsado. Waxa ugu fiican oo ku saabsan qalab tani ay tahay in la heli karo si xor ah oo ay ku bixisaa adeegyo in ugu dambeyntii u dhigma kuwa ka mid ah qalab lagu bixiyo. Waxaa jira badan oo kale joiners video halkaas oo aan marnaba noqon kartaa boos si ay u dhan gabaabsi. Si kastaba ha ahaatee, u wax ku ool ah oo degdeg ah video midoobeen, barnaamijyada kor ku hubaal idinku siin doonaa adeeg aad marna la filayo. Inta badan qalabka ma u baahan doonaa videos kaliya ku biiro leh qaab isku mid ah, laakiin waxay sidoo kale loo ogolaan karin in aad ku biiri videos kuwa qaabab kala duwan si fudud.
> Resource > Video > Sida loo soo biir Dhowr 3GP Video Files galay File ah Single